Condo for Sale in Dagon Myothit (Seikkan) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Condos for Sale in Dagon Myothit (Seikkan)
(1310-sqft)အကျယ်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒို၊ ပြင်ဆင်ထားပြီး လူမနေထိုင်ရသေးသော အခန်းသစ်...
တည်နေရာ - ဧရာချမ်းသာကွန်ဒို၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။ အကျယ်အဝန်း - (1310-sqft)...
Ad Number S-10019239
1,040 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10024479
🙏🙏🙏...ဧရာချမ်းသာ condo အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏
Ad Number S-10002260
🇲🇲🌲 ဧရာဝဏ်လမ်းမပေါ် ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုရှိ အလွှာနိမ့်နိမ့်တွင် နေချင်သော...
Ad Number S-9999906
Ad Number S-9992154
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၊ ဧရာချမ်းသာCondo
Ad Number S-9982675
🙏🙏🙏...ဧရာချမ်းသာcondo အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏
Ad Number S-9968176
🙏🙏🙏...ဧရာချမ်းသာ condo အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏
Ad Number S-9968142
🙏🙏🙏...ရတနာနှင်းဆီအိမ်ယာတွင် viewကောင်းသည့် condo တိုက်ခန်းလေး ဈေးတန်တန်ဖြင့် ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏
Ad Number S-9957581
Ad Number S-9956994